मनोरञ्जन – Page2– Light Nepal
तौल घटाउने झुटो बाचा गरेको भन्दै ऋतिक रोशन विरुद्ध मुद्दा दायर
July 4, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on तौल घटाउने झुटो बाचा गरेको भन्दै ऋतिक रोशन विरुद्ध मुद्दा दायर
एजेन्सी । नयाँ फिल्म ‘सुपर ३०’को प्रमोसनमा व्यस्त रहेका अभिनेता ऋतिक रोशन विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनलाई धोका दिएको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो । आई शशिकान्त नामका एक जिम युजरले जिम कम्पनी र त्यस कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेसडर रहेका ऋतिकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । वजन कम गराउने र वर्कआउट गराउने बाचा पूरा […]
विवाह नगरी चर्चित भारतीय नायिकाले छोरी जन्माएको खबरले तात्यो भारतीय मिडिया
July 3, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on विवाह नगरी चर्चित भारतीय नायिकाले छोरी जन्माएको खबरले तात्यो भारतीय मिडिया
एजेन्सी । एक चर्चित नायिकाले विवाह नै नगरी छोरी जन्माएको विषयले भारतिय मिडिया तातेको छ । भारतिय मिडियामा सो विषय अहिले चर्चामा छ । अववाहित नायिकाले आफूसँग तीन वर्षकी छोरी रहेको बताएपछि धेरैलाई अचम्म लागेको छ । गोप्य रहेको सो विषय अहिले सार्वजनिक भएपछि मिडियाका लागि खुराक बनेको छ । ती नायिका हुनु, माही गिल […]
सलमान खानले यस्तो तस्बिर पोष्ट गर्दै दिए चेतावनी
July 2, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on सलमान खानले यस्तो तस्बिर पोष्ट गर्दै दिए चेतावनी
एजेन्सी । बलिउड नायक सलमान खान सँधै चर्चामा आइरहने कलाकार हुन् । उनको उमेरको हाफ सेन्चुरी पूरा गरिसकेको छ । तर पनि फिटनेसको मामलामा उनले धेरैलाई उछिनेका छन् । निकै मेहनत गर्न मन पराउने सलमान उमेरले हाफ सेन्चुरी काटेपनि सँधै चर्चामा रहनुको कारण पनि यहि नै हो । उनको शानदार बडीको झलक उनको पछिल्लो सोसल […]
अभिनेत्री कृति भट्टराईले गरिन् दोस्रो विवाह
June 26, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on अभिनेत्री कृति भट्टराईले गरिन् दोस्रो विवाह
काठमाडौं, ११ असार । अभिनेत्री कृति भट्टराईले दोस्रो विवाह गरेकी छन् । चलचित्र ‘विश्वास’, ‘उनको सम्झनामा’, ‘उपहार’ लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी अभिनेत्री भट्टराई बुधवार विवाह बन्धनमा बाँधिएकी हुन् । उनले बुधवार रोहित पौडेलसँग हिन्दू परम्पराअनुसार लगनगाँठो कसेकी छन् । केही टेलिचलचित्रमा पनि काम गरेकी कृति पहिले सञ्चारकर्मी रवि श्रेष्ठसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् । तर, […]
संसद्मा ‘गलबन्दी च्यातियो’ गीतको चर्चा
June 25, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on संसद्मा ‘गलबन्दी च्यातियो’ गीतको चर्चा
काठमाडौं, १० असार । प्रतिनिधिसमाको बैठकमा सांसदहरुले ‘गलबन्दी च्यातियो’ शीर्षकको गीतका सम्बन्धमा कुनै समुदायमाथि नै आघात हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद विमला विकले ‘गलबन्दी च्यातियो ’ शीर्षकको गीतको लय नक्कल भएको भन्दै गीतका सर्जकद्वय प्रकाश सपुत र शान्ति […]
सैफ अलि खानकी सासुलाई देखेपछि पुरुष गाउँ छोडेर भाग्थे, खाली हुन्थ्यो बस्ती
June 25, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on सैफ अलि खानकी सासुलाई देखेपछि पुरुष गाउँ छोडेर भाग्थे, खाली हुन्थ्यो बस्ती
एजेन्सी । भारतमा जनसंख्या अत्याधिक भएका कारण विकास हुन नसकेको अड्कल काटेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका कान्छा छोरा संजय गान्धीले भारतमा एउटा अभियान चलाए । उनले जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय देखे त्यो हो बन्ध्याकरण । सन् १९७५ देखि १९७७ सम्म भारतमा संकटकाल लगाइएको थियो । त्यति नै बेला भारतमा पुरुष बन्ध्याकरणको अभियान चलाइयो । […]
गित चोरीको आरोप लागेका प्रकाश सपुतलाई जातिय विभेद हुने टिप्पणी आएपछि भने ‘म भागेको छैन’ (भिडियो हेर्नुस्)
June 24, 2019 June 24, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on गित चोरीको आरोप लागेका प्रकाश सपुतलाई जातिय विभेद हुने टिप्पणी आएपछि भने ‘म भागेको छैन’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, ९ असार । गीतकार तथा गायक प्रकाश सपुतले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको गलबन्दी बोलको गित विवादित भएको छ । उनलाई सो गित चोरी गरेको आरोप लागेको छ । वरिष्ठ गितकार शम्भु राईको गितसंग मेल खाएको भन्दै विवादित भएपछि उनले त्यसको जवाफ पनि दिइसकेका छन् । तर पनि प्रकाशलाई भेट्न चाहने र कुरा गर्न चाहनेहरुलाई […]
प्रियंकाले धोका दिएपछि आयुष्मानसंग भयो विछोड (भिडियो हेर्नुस्)
June 24, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on प्रियंकाले धोका दिएपछि आयुष्मानसंग भयो विछोड (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, ९ असार । रियल लाइफमा एक अर्कासंग डेटमा रहेका आयुष्मान र प्रियंका एउटा म्युजिक भिडियोमा भने विछोडिएका छन् । प्रियंकाले इन्गेजमेन्ट औंठी लाइसकेका आयुष्मानलाई धोका दिएकी छन् । गायक मोहन राईको गीत ‘मायाको खेल, आँसुको भेल’ को म्युजिक भिडियोमा प्रियंका र आयुष्मानबीच विछोड भएको देखाएएको छ । दीपेन्द्रनाथ शर्माको शब्द र कन्काइस्ट राईको संगीत […]
भीम श्रेष्ठको ‘अक्सर छाता छुट्ने गर्छमा अञ्जली अधिकारीको दमदार अभिनय (भिडियो)
June 21, 2019 लाइट नेपालLeaveaComment on भीम श्रेष्ठको ‘अक्सर छाता छुट्ने गर्छमा अञ्जली अधिकारीको दमदार अभिनय (भिडियो)
काठमाडौं – भीम श्रेष्ठको समधुर स्वरमा सजिएको रामहरि भेटुवाल र सन्दीप पुडासैनीका शब्द शृजना समावेश छन् । झरी सम्झाउने यो गीतमा सञ्जीव पुडासैनीको संगीत रहेको छ । सैलेन्द्रमान प्रधानको एरेन्ज रहेको गीतमा सुन्दरी अञ्जलीलाई प्रदीप लामाले अभिनयमा साथ दिएका छन् । भिडियोमा अञ्जली र प्रदीप प्रेममा हराएको देख्न सकिन्छ । यस्तै प्रविन भट्टको सम्पादन रहेको […]
अघोरी बाबाले भने: ‘अब म अन्तरवार्ता दिन्न, मलाई भेट्ने भए क्यामेरा बन्द गरेर आउ’, के भएछ त्यस्तो ? (भिडियो हेर्नुस्)
June 18, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on अघोरी बाबाले भने: ‘अब म अन्तरवार्ता दिन्न, मलाई भेट्ने भए क्यामेरा बन्द गरेर आउ’, के भएछ त्यस्तो ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, ३ असार । सामाजिक सञ्जाल र युट्युव च्यानलहरुमा भाइरल भएका अघोरी बाबाले अब मिडियामा अन्तरवार्ता नदिने भएका छन् । उनले एउटा युट्युव च्यानलमा अन्तरवार्ता दिँदै यो नै आफ्नो अन्तिम अन्तरवार्ता भएको बताएका छन् । आफुकहाँ उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्यलाई लिएर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनले बताएका छन् । धेरै समय यता युट्युवमा छाइरहेका अघोरी […]